🥇 दन्त चिकित्सालयको लेखा
रेटिंग: 4.9. संगठनहरूको संख्या: 158
दन्त चिकित्सालयको लेखाको भिडियो
दन्त चिकित्सालयको एक लेखा आदेश दिनुहोस्
डेन्टल क्लिनिकको कामका लागि ग्राहकहरू, दन्त चिकित्सकहरू र प्रशासकहरूको राम्रो लेखा र समसामयिक व्यवस्थापन आवश्यक छ। दन्त चिकित्सा क्लिनिक लेखा सफ्टवेयर एक कार्यात्मक लेखा प्रणाली हो जुन दुबै प्रशासकहरू र टाउको दन्त चिकित्सकलाई मद्दत गर्दछ। डेन्टल क्लिनिक नियन्त्रणको लेखा आवेदन प्रविष्ट गर्न, तपाईले आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम टाइप गर्नु पर्छ, व्यक्तिगत पासवर्डले सुरक्षित गरिएको, र तपाईले आफ्नो कम्प्यूटर डेस्कटपमा एउटा आइकन थिच्नुहोस्। यसमा थप्दै, डेन्टल क्लिनिक लेखा सफ्टवेयरको प्रत्येक प्रयोगकर्तासँग निश्चित पहुँच अधिकारहरू हुन्छन्, जसले प्रयोगकर्ताले हेर्ने र प्रयोग गर्ने डाटाको मात्रा सीमित गर्दछ। दन्त क्लिनिकको स्वचालन ग्राहकहरूको भेटघाटको साथ सुरू हुन्छ। यहाँ, तपाइँको स्टाफ सदस्यहरूले दन्त चिकित्सा क्लिनिक लेखा कार्यक्रम प्रयोग गरी एक ग्राहक संग भेट गर्न। बिरामी दर्ता गर्न तपाईंले दन्त क्लिनिकको रेकर्ड विन्डोमा आवश्यक डाक्टरको ट्याबमा आवश्यक समयमा डबल क्लिक गर्नुपर्नेछ र सेवाहरूलाई संकेत गर्नुहोस् जुन पूर्व-कन्फिगर गरिएको मूल्य सूचीबाट छनौट हुन सक्छ।
सबै जानकारीहरू बचत गरिएको छ र डेन्टल क्लिनिक अनुप्रयोगमा सम्पादन गर्न सकिन्छ, तपाईंको संस्थाको विवरणहरूलाई ध्यानमा राख्दै। दन्त चिकित्सा क्लिनिक नियन्त्रणको लागि लेखा सफ्टवेयरसँग सेक्शन 'रिपोर्टहरू' हुन्छ जुन संस्थाको प्रमुखका लागि धेरै उपयोगी छ। दन्त क्लिनिक नियन्त्रणको यस खण्डमा, तपाईं कुनै पनि समयावधि को संदर्भ मा फरक रिपोर्ट बनाउँछ। उदाहरण को लागी, बिक्री मात्रा रिपोर्ट एक विशेष प्रक्रिया मा कति खर्च भएको स indicates्केत गर्दछ। मार्केटि report रिपोर्टले विज्ञापनको नतीजा झल्काउँछ। स्टक कन्ट्रोलको रिपोर्टले देखाउँदछ कि कुन वस्तुहरू चाँडै नै फेरि तपाईंको गोदाम पूर्ण गर्नको लागि अर्डर गर्न आवश्यक छ। दन्त चिकित्सा क्लिनिक अनुप्रयोग सबै चिकित्सा कर्मचारीहरूको लागि मात्र उपयुक्त छैन, तर तपाईंलाई सामान आपूर्तिकर्ता, जग्गा मालिक र बीमा कम्पनीहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं हाम्रो वेबसाइटबाट दन्त क्लिनिकको लागि लेखा सफ्टवेयरको निःशुल्क संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। दन्त क्लिनिक लेखा कार्यक्रमको मद्दतले तपाइँको संगठन स्वचालित गर्नुहोस्!
परिणामहरूको नियन्त्रण र सबै प्रक्रियाहरूको अनुगमन दन्त क्लिनिकमा अर्डर स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण हो। राजस्व वृद्धि र लागत घटाउने एक यादृच्छिक घटना हुनेछ यदि तपाईं परिणामहरूको ट्रयाक राख्नुभएन भने। लेखा कार्यक्रमले सबै नियन्त्रण बिन्दुमा सूचकहरू कब्जा गर्दछ, परिवर्तनहरूको गतिशीलता र कारण-सम्बन्ध सम्बन्धहरूको निर्माण गर्दछ, र त्यसपछि रिपोर्ट र सिफारिशहरूको रूपमा प्रक्रिया गरिएको जानकारी प्रदर्शित गर्दछ। यसले परिणामहरूको स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ। व्यवसाय मापन को रूप मा - यो एक दन्त क्लिनिक को कुनै पनि प्रबन्धक सपना सपनाको केहि हो। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं त्यस अवस्थामा पुगेको छ जहाँ तपाईंको व्यवसाय हालको सर्तहरूमा थोरै छ। र तपाइँको ब्यापार विस्तार मात्र अतिरिक्त सेवा आउटलेट को ढाँचा मा समझ मा बनाउँदछ। तपाईंले भाँडा, उपकरण, र कामदारहरूलाई काममा लिएर समस्या समाधान गर्नुभयो। तर अन्य प्रश्नहरूको एक समूह अझै बाँकी छ: कसरी कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने, उनीहरूलाई सबै जानकारी र अनुभव दिनुहोस् जुन तपाईंले पहिल्यै प्राप्त गरिसक्नुभयो? तपाईं कसरी तिनीहरूको काम नियन्त्रण गर्नुहुन्छ? तपाइँ कसरी योजनाहरू सेट गर्नुहुन्छ र नतीजा जाँच गर्नुहुन्छ? व्यापार स्वचालनले यी सबै प्रश्नहरू समाधान गर्दछ।
युएसयू-सफ्ट लेखा कार्यक्रम कार्यहरूको विभाजनको सिद्धान्तमा निर्माण गरिएको हो - जुन भूमिका अन्तर्गत कर्मचारीले लग ईन गरेमा आधारभूत भूमिकाहरू ('निर्देशक', 'प्रशासक', 'दंत चिकित्सक') छन्, तर थपमा तपाईं अन्य क्लिनिक कर्मचारीहरूका लागि भूमिका र खाताहरू सिर्जना गर्न सक्दछ, जस्तै 'एकाउन्टेन्ट', 'मार्केटि specialist विशेषज्ञ', 'आपूर्ति श्रृंखला विशेषज्ञ' र अन्य। लेखा कार्यक्रममा लग ईन गर्न भूमिका व्यवसाय द्वारा निर्धारित गरिन्छ, जुन प्रत्येक कर्मचारीको लागि कार्ड र खाता सिर्जना गर्दा सेट गरिएको हुन्छ (लेखा कार्यक्रममा लग इन गर्ने पासवर्ड)। त्यसोभए, तपाईले कर्मचारीको बारेमा जानकारी भर्नु पर्छ। न्यूनतम आवश्यक जानकारी पहिलो नाम, अन्तिम नाम र पेशा हो। पेशा तोक्नको लागि 'छनौट गर्नुहोस् पेशा' क्षेत्रमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र सुझाव गरिएको सूचीबाट एक विकल्प थप्नुहोस् ('प्रोफेशन' डाइरेक्टरी पहिले नै लेखा प्रोग्रामको स्थापनाको चरणमा हामीद्वारा भरेको छ, तर तपाईं यसलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ)। यदि कुनै कर्मचारीसँग धेरै पेशा हुन्छन् भने त्यहाँ धेरै कार्डहरू सिर्जना गर्नु आवश्यक पर्दैन। यो एकैमा उसको सबै व्यवसाय निर्दिष्ट गर्न पर्याप्त छ। प्रोफेशन फिल्डमा यो राइट क्लिक गर्नुहोस् र सुझाव गरिएको सूचीबाट एक विकल्प थप गर्नुहोस्।
दन्त क्लिनिक विकासको स्थिति प्रतिबिम्बित गर्न अनुप्रयोगसँग धेरै रिपोर्टहरू छन्। 'क्यास फ्लो' रिपोर्टले नगद प्रवाह र बहिर्गमन देखाउँदछ र तपाईंलाई नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। यदि दिनको नगद रिपोर्ट लेखा कार्यक्रममा उत्पन्न रिपोर्ट जस्तै नै छ भने, तपाईं विश्वासका साथ भन्न सक्नुहुन्छ कि सबै अर्डरहरू र भुक्तानहरू लेखा कार्यक्रमको माध्यमबाट चलाइएको छ, र वित्तीय डाटालाई भरोसा गर्न सकिन्छ।
'गतिविधि को क्षेत्रबाट राजस्व' रिपोर्टले तपाईंलाई क्लिनिकको प्रत्येक क्षेत्र र प्रत्येक दन्त चिकित्सकले कति पैसा ल्याउँदैछ भनेर हेर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं यसलाई बिरामी debtsण र अग्रिमहरू, फिर्ताको संख्या, पुनः-उपचार अन्तर्गत ट्र्याक राख्न पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। वारेन्टी, सेवा बिल संख्या, भुक्तान गरिएको रकम, र अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय मेट्रिक्स। नियुक्ति रिपोर्टहरूले तपाईंलाई क्लिनिकमा बिरामीको समय व्यतीत गर्न मद्दत गर्दछ। यो रिपोर्ट को एक धेरै महत्त्वपूर्ण समूह हो। उनीहरूसँग सक्रिय कार्यले तपाईंलाई नयाँ स्तरको सेवामा पुग्न र डाक्टरहरू र प्रशासकहरूको प्रदर्शन सुधार गर्न अनुमति दिन्छ, र यसरी क्लिनिकको नाफा बढाउँदछ। 'डाक्टरहरू' लोड रिपोर्टले तालिका दक्षताका साथ सिर्जना गरिएको हो कि छैन, प्रत्येक डाक्टर क्लिनिकमा कती उपयोगी छ र कुन डाक्टरले सबैभन्दा बढी आम्दानी ल्याउँछ भनेर देखाउँदछ।